Date My Pet » Sei Murume Jobho Inogona Pachena Chimiro chake Romantic
Zvakanaka, saka imi munoziva sei Astrology yave kushandiswa dzinovuya kuongorora unhu uye kufanotaura kugarisana kunobva pamusoro inogara mapuraneti?
... On zvinhu zvakafanana kana iwe vakaberekwa uye kana uri "mvura chiratidzo" kana "zuva chiratidzo?"
tsime, Handisati dzakabudirira yakafanana ezvinhu kunobva pamusoro mukomana wacho Gig.
Ndizvozvo: mutsetse ake basa zvingaratidza kana kwete vaviri mucha "basa" iri kudanana uye kuberekesana nhandare.
Kunyange hurongwa angasava chaizvo "sayenzi,"Anomutora kunobva zvakawanda rucherechedzo, kufungisisa, kuturikira, kubvunzurudza uye kupedza nguva navo vashoma kunozivikanwa munda "makonzo."
Kana uchida kutora mamwe kufungidzira basa kubva ndiani kuti vakabudirira zvepabonde nevanhu, narini zvawanikwa, verenga uye kuteerera.
VANYORI AND VADETEMBI (The Artsy mhando)
vanhu ava sokunongoitika rondedzero dzokufungidzira dzinowanzoguma, da, uye kuita. Vanoona rwiyo girazi sezvo hafu zvizere. kakawanda conversationalist kukuru, uye kunozonakidza kuti kutamba. Ndivo mukono shanduro shamwari yako yepamwoyo. asi chenjera: izvi "midzimu vakasununguka" dzimwe nguva kunogona kuzvipira phobic uye Zvibvisike.
Kana muri kufambidzana mudzidzisi, kune mukuru kirasi.
Kunyange paine zvimwe kunze kuti mutemo, varume vanodzidzisa vari yemanyorero mhando, murwere, zvakanaka nemhuka uye nevana, uye muri "nokukurumidza kudzidza." Wedzera ichi chokwadi kuti vari mukuru multi-taskers pamwe kupfuura avhareji pfungwa unyanzvi.
Accountants AND NHAMBA CRUNCHERS
Kazhinji vanhu vari muchikwata ichi ndivo vaitevedza mhando. Unogona "verenga" riri cuties izvi kuitwa zvizere nezvatinovavarira, kasira, uye mari pinchers uyewo. Vane wakaoma mitemo. Kana uri mumba chinzvimbo, twasu-zvakafanana norwonzi, hunoshanda mhando, uchawana mufaro pano.
MAPURISA, Vadzimi, Nenhongo Vanamukoti
Chii hadzi haadi kuti "akanunura?"Guys muminda izvi vanozivikanwa kuva akashinga, chengetedza, chiremera, uye kutarisira. Handina kutaura zvavari Kazhinji utano hwakanaka? Vazhinji vari chaizvo vanhu nezvatinovavarira, nepfungwa kukudzwa uye basa.
Uchaona kuti vave "vakaenzana" vadyidzani muukama.
Imi tinya pamwe neshamwari izvi kana uri musoro, vakamhan'arira, tichinetseka nezvatiri, uye zvakanaka dambudziko solvers; vachiri.
THE vanotogara rovha
Ngatimbotaurei zvazviri, isu tese kana wafambidzana nomumwe munhu muchikwata ichi.
"Basa" yake moonlighting sepokurara mbatatisi.
Ari achiri kuedza 'kuwana pachake. "Kana nguva dzose pasi rombo ake. Kana achiri kuedza kutevera hope yake yokuva werock pa matatu. Rudyi? kana zvakadaro, ungada kufunga zvaunogona kusarudza uye "blue pitikoti" iye nokukurumidza.
RUVARA chipika VS. WHITE chipika–Ndezvipi zviri nani?
zvisarudzo, zvisarudzo. Ko musikana kuita?
Hazvinyaradzi nani kudanana yebhuruu pamipendero murume kana chena chipika söpöläinen?
tsime, zvose zvinobva.
Blue chipika varume kakawanda pasi pano uye zvakanaka namaoko avo. Unovaona Kazhinji nyore kuva, pamwe egos dzaserera. vanganzi, vari kazhinji zvikuru musana.
White chipika varume kazhinji vane zvikuru kuwana zvinogona, sokunongoitika chepfungwa, uye tiri dambudziko guru solvers.
Kunyange izvi hazvisi mitemo dzakaoma uye nokutsanya, uchawana navo kushanda zhinji kufambidzana ezvinhu. Zvose zvamunoita, sarudza nokuchenjera.
Shure kwezvose, rudo kunokosha "bhizimisi."
Vanogona Pet Allergies uye Dating pamwe?
Chii Man wose Kuita pamusoro Date First
5 Zvinhu Girls Itai Pashure Ndarambwa